प्रवासबाटै नेपाली गीत-संगीतमा सक्रियता :: Setopati
प्रवासबाटै नेपाली गीत-संगीतमा सक्रियता
प्रकाश सापकोटा कोपन्हेगन, चैत ३
दुइ-चार वर्ष विदेश बस्दैमा बिदेशीकै नक्कल गर्ने, विदेशी लवजमै बोल्न थाल्ने, जाने/नजानेको बिदेशी गीत-संगीतमा शरीर हल्लाउने नक्कली र देखावटी मानिसहरु मात्र छैनन् नि यो दुनियाँमा ! परदेशमा रहंदा आफ्नो देश, कला, संस्कृति र आफ्नोपन झन् धेरै 'मिस' हुन्छ। आधुनिकताको आडम्बरी खोल नओढ्नेहरुले त्यो देखाउँछन, देखाएरै छाड्छन्।
त्यसै गरेका छन्- रबिन्द्र स्यामुअलले। चार वर्ष डेनमार्क बसाइका क्रममा यहाँका नेपाली संस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा स्टेज उक्लिएर गाउन कस्सिइ हाल्ने स्यामुअलमा गायनको नसा सवार नै थियो। काम गर्दा पनि नेपाली गीत गुनगुनाई रहने बानि थियो। त्यस्तै परे बेला-मौका नेपाली सांगीतिक कार्यक्रमहरुको आयोजनामा खटेर सहयोगीको भूमिका निभाउँथे। सामाजिक काममा पनि चासो देखाउने उनीलाई सुनेकाहरुले भन्ने गर्थे- गायनमा भविष्य छ है केटाको !
नभन्दै डेनमार्कबाट नेपाल फर्किए लगत्तै स्यामुअलले एक आधुनिक गीत रेकर्ड गराएर त्यसको म्युजिक भिडियो समेत सार्वजनिक गरेका छन्। जितेन लेप्चाले लेखेर आफैले संगीत भरेको 'मनको कुरा' बोलको गीतलाई स्यामुअलले स्वर दिएका हुन्। गीतको अडियो बनेको लगत्तै धर्म घिमिरे र क्रिस्टिना थापालाई अभिनय गराएर मिलन शंकरको निर्देशनमा म्युजिक भिडियो पनि बनाए। सो भिडियोलाई एसियन म्युजिकले युट्युब मार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ। दर्शक श्रोताको साथ र हौसला पाए यो क्षेत्रमा जमेरै लाग्ने इच्छा उनले सुनाए।
त्यसो त, डेनमार्क बसाइका दौरान पनि नेपाली गीत-संगीतलाई नछोड्ने स्यामुअल एक्ला व्यक्ति होइनन। रहरले भन्दा धेरै बाध्यता र परिबन्धले कैयौं नेपाली युवाहरु आफूभित्र कलाकारिताको भ्रुण हुर्कंदै गर्दा विदेशिएका छन्। ती मध्ये धेरैजसोले आफ्नो प्रतिभा र कला प्रवासबाटै प्रस्तुत गरिरहेका छन्।
कोपन्हेगन बसोबास गर्ने राजमान तामांगले युरोपभर आफूलाई आशातित गायकका रुपमा चिनाइसकेक छन्। गत वर्ष छुट्टीमा नेपाल गएर आफूले स्वरबद्ध गरेका गीतहरुको एल्बम नै निकाले। त्यो चर्चित पनि भयो। आफुलाई आधुनिक गीतको क्षेत्रमा उनले अझ राम्ररी चिनाए।
गायनमा रुचि हुँदाहुँदै त्यो रुचि आफैंसंग बोकेर बिदेशिएका अर्का युवा प्रोमिस जङ्ग थापालाई पनि संगीतको सक-सकले छोड्दै छोडेन। गत फेब्रुअरीमा डेनमार्कमै एउटा नेपाली पपगीत रेकर्ड गराए। पछि सथिभाइलाई सुनाउँदा उनीहरुले पनि मन पराए। झन् हौसिएर डेनमार्कमै नव-कलाकरहरूलाई खेलाएर म्युजिक भिडियो नै बनाए। उनको भिडियो म्युजिक नेपालले सार्वजनिक गर्यो। अहिलेसम्म ३२ हजार जतिले हेरिसकेका छन्।
डेनमार्कबाटै सोबू केसी, कुसुम दाहाल लगायतले पनि गायन मार्फत नै नेपाली गीत-संगीतलाई फिंजाउने कोसिस गरिरहेका छन्।
विदेशमा रहँदैमा नेपाली कलासंस्कृति भुलिहालिने कहाँ हो र, त्यो त झन् बढ्छ। बरु झन् जति टाढा भयो त्यति आफ्नोपनको मायाले छोप्छ पो त, कलाकारहरु भन्छन्।
उता डेनमार्कमै बसेर नेपाली नृत्य विधालाई नेतृत्व गर्दै अगाडी लाँदैछन्- सन्तकुमार थापा मगर। त्यस्तै, केहि युवा युवतीमा अभिनयको 'क्रेज' देख्न थालिएको छ ।
नेपाली बाजागाजा, पहिरनलाई युरोपभरी चिनाउने अभियानमै लागेका छन्- पूर्ण बन्धन। बन्धनको अगुवाइमा नेपलिज स्ट्रिट फेस्टिभल फाउन्डेसनले केहि बर्ष यता कोपन्हेगनमा नेपाली बाजागाजा सहितको र्याली सहितको साङ्गीतिक प्रदर्शनी नै गर्दै आएको छ। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव-महोत्सब हुँदा पूर्ण बन्धनको नेपाली कला संस्कृति प्रदर्शन गर्ने एउटा स्टल प्राय: छुट्दैन।
आफ्नो देशभन्दा टाढा व्यस्त दैनिकीका बाबजुद पनि नसामा बगिरहेको कलाकारितालाई संगसंगै लैजाने र नेपाली संस्कार, परम्परा, संस्कृतिलाई प्रवासबाटै अझ फैलाउने कोसिस गरिरहेका प्रतिभाहरुको हौसलाका लागि यत्ति त लेख्नै पर्छ जस्तो लाग्यो। हैन र ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ३, २०७४, ००:५३:५७